Prof. Xareed oo Falaanqaynaya sida looga Faa’iidaysan Karo Biyaha Roobka (Dhegayso) – Radio Daljir
Prof. Xareed oo Falaanqaynaya sida looga Faa’iidaysan Karo Biyaha Roobka (Dhegayso)
Abriil 29, 2017 8:44 b 2
iyadoo ay meelo badan oo ka mid ah gobolada Puntland ay ka curteen roobabkii guga ayaa waxaa laga cabsi qabaa in roobabkaasi ay ka dhashaan qasaare ugaystaan dadka iyo duunyada oo ay saamaysay abaartii siman ee jirtay mudo ku siman 4 sano.
Hadaba Sidee looga faaiidaysan karaa roobabka guda loogana gaashaaman karaa qasaaraha ka dhalan kara? su,aalahaas iyo kuwo kale waxaan hor dhignay Barafasoor Maxamed xareed oo bare ka ah jaamacada bariga afrika waxna ka dhiga maadada kuliyada xanaanada xoolha .
Wariye maxamuud cabdi ibraahin ayuu uwaramay.
Roobab Lagu Diirsaday oo Ka Da’ay Gobolka Sanaag (Waraysi)
Waxaan danaynaya inad ilasoo wadagto qabka ugu macqulsan oo bada looga faaidaysan karona waliba dhanka dalxiiska
maxamed maxamud 3 years ago
AMAl BANK(AB)wa bank uga
U Jawaab maxamed maxamud Buri halceliska